Semalt विशेषज्ञ एसईओ र सशुल्क मीडिया को लागी गुगल विज्ञापन कीवर्ड पूर्वानुमान उपकरण को उपयोग कसरी गर्ने बताउँछ
गुगल विज्ञापन पूर्वानुमान उपकरणले एसईओ र सशुल्क मिडियामा कुनै कुञ्जी शब्दहरूको लागि भावी सम्भावनालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो बुझ्नाले तपाइँ कर्भ भन्दा अगाडि रहन सक्षम गर्दछ।
गुगल विज्ञापन कुञ्जी शव्दहरू पूर्वानुमान उपकरण एक हुनुपर्दछ यदि तपाईं योजना बनाउने तर तपाईंको प्रतिस्पर्धालाई नपार्न मात्र योजना बनाउनु भएको छ। यहाँ तपाईंको फाइदाको लागि गुगल पूर्वानुमान उपकरणको एक रौंडाउन छ र यसलाई कसरी एसईओ मिडिया मिक्समा एकीकृत गर्ने।
गुगल विज्ञापन कीवर्ड पूर्वानुमान उपकरण के हो?
हालको ट्रेंडि thing के हो भनेर थाहा पाउनु एक चीज हो। यो अनुमान गर्नको लागि अर्को चीज हो जुन भोलि, हप्ताहरू, र भविष्यमा अझ प्रलोभनमा पर्ने छ। यो एक अवस्था हो जहाँ तपाईं भविष्यमा देख्न सक्नुहुनेछ। किनकि गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरणहरूले यसलाई सम्भावना बनाउँदछ, यो डिजिटल मार्केटरहरूको लागि मूल्यवान सम्पत्ति हो।
नामबाट, यो स्पष्ट छ कि यसले भविष्यमा हेर्छ। यो उनीहरूको SEM र SEO खेल सुधार गर्न को लागी कसैको लागि एक उत्तम विकल्प हो। गुगल विज्ञापन कुञ्जी शव्दहरू पूर्वानुमान उपकरणले कुनै पनि कुञ्जी शब्द वा कुञ्जी शब्दहरूको सेटको लागि भावी सम्भाव्यतालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। Google को अनुसार, तिनीहरूको पूर्वानुमान दैनिक डेटा अपडेट भयो जुन उनीहरूले स have्कलन गरेको डाटासँग दश दिन पछि फिर्ता जानेछ। यो विश्लेषणलाई बनाउने डेटामा बजार परिवर्तनहरू समावेश छन् जुन यस अवधिभर भइरहेको थियो। अन्य कारकहरू जस्तै मौसमीतालाई ध्यान दिइन्छ ताकि तपाईं प्राकृतिक बजारको उतार चढावबाट अलमल नहुनुहोस्।
गुगल विज्ञापन कीवर्ड पूर्वानुमान एक आश्चर्यजनक उपकरण हो।
कसरी र किन पूर्वानुमान उपकरण प्रयोग गर्ने
पूर्वानुमान उपकरण धेरै मोर्चमा उपयोगी छ, विज्ञापन प्लेटफर्म सम्पूर्ण रूपमा उपयोगी छ भन्ने प्रमाणित। एक उपकरणको रूपमा, यसले आजको डाटाको तेर्सो होल्ड भ break्ग गर्न र निकट भविष्यको लागि अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्षम भएको छ। पूर्वानुमान उपकरणको रूपमा, यसले तपाईंलाई कसरी तपाईंको कुञ्जी शब्दहरू इष्टतम सेटिंग्समा काम गर्दछन् मद्दत गर्दछ।
यो उपकरणको साथ, तपाईं:
तपाईंको अधिकतम लागत प्रति क्लिक जाँच गर्नुहोस् (सीपीसी)। यो तथापि, तपाइँको बजेट मा निर्भर गर्दछ।
तपाईंको अनुमानित प्रदर्शनको चार्ट हेर्नुहोस्।
तपाईंको कुञ्जी शब्दहरूको लागि अनुमानहरू हेर्नुहोस्।
तपाइँको अधिकतम सीपीसीमा परिवर्तन गर्नुभएमा तपाइँको अनुमानहरु लाई कसरी प्रभाव पार्ने हेर्नुहोस्।
तपाइँको पूर्वानुमान मिति दायरा र समय सीमा समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ यसले कसरी तपाइँको पूर्वानुमानलाई असर गर्दछ भनेर। त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन तपाई गुगल विज्ञापनमा पूर्वानुमान हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हामी विज्ञापन कुञ्जी उपकरण उपकरण चरण-चरण भंग गर्नेछौं।
पूर्वानुमानका लागि गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरण प्रयोग गर्दै
गुगल विज्ञापन कुञ्जी शव्द योजनाकार भित्र, एक विशेषता पूर्वानुमान भनिन्छ। खोज भोल्यूम र पूर्वानुमानमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछि, तपाईं एकल कुञ्जी शब्द वा कुञ्जी शब्दहरूको समूह प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अल्पविराम वा लाइन ब्रेक द्वारा विभाजित।
यस सुविधाले तपाईंलाई स्प्रिडशिट फाइल अपलोड गर्न पनि अनुमति दिन्छ यदि तपाईंसँग धेरै कुञ्जी शव्दहरू छन् र पूर्वानुमान उपकरणमा तिनीहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नुहोस्। यो काम गर्न को लागी द्रुत तरीकाको रूपमा सोच्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो कुञ्जी शव्दहरू सफलतापूर्वक राख्नुभयो भने, सुरू क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईं केही ट्याबहरूको साथ पृष्ठमा आउँनुहुनेछ।
यी तीन ट्याबहरू हुन्:
नकारात्मक कुञ्जी शब्दहरू
जब तपाईं पूर्वानुमान पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं पहिलो ट्याबमा टाँस्नु पर्छ।
तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको कुञ्जीशब्दहरूको आधारमा तपाईंले पूर्वानुमान डेटाको सेक्सन देख्नुहुनेछ। गुगल विज्ञापनहरू स्वचालित रूपमा तपाईंलाई भन्छ:
क्लिकहरू प्रति दिन यदि कुञ्जी शब्दहरूले तपाईंको विज्ञापन ट्रिगर गर्दछ
प्रति दिन एक विशेष कुञ्जी शब्द चलाउन लागत
क्लिक-थ्रु दर (CTR)
औसत राशि तपाईं एक विज्ञापन क्लिक, वा औसत सीपीसी को लागी तिर्न सक्नुहुनेछ
अन्य रूपान्तरण मेट्रिक्स तपाईको प्राथमिकता र जानकारीको आधारमा थप्न सकिन्छ तपाईको ब्रान्डको अद्वितीय मार्केटिंग योजनाको पूर्वानुमान गर्न आवश्यक जानकारी। यदि तपाईं एक पूर्वानुमान गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको आवश्यकताको लागि पूर्ण रूपमा फिट छ, यो एक महत्त्वपूर्ण चाल हो जुन तपाईंले आफ्नो बाहुलामा बनाउनु पर्छ।
यो गर्नका लागि, रूपान्तरण मेट्रिक बटन थप्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो गरिसकेपछि, तपाईंलाई निफ्टी ग्राफ र डाटा चार्टले छोडिनेछ जुन तपाईंको चयनित कुञ्जी शब्दहरूको लागि भविष्यमा हुने भविष्यवाणी गर्छ।
यस उपकरणको प्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको मार्केटिंग र SEO अभियानहरूको लागि कार्यको उत्तम योजना निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ जुन आउन बाँकी छ। यो पनि तपाईंलाई थाहा दिन्छ यदि तपाईं बजार परिवर्तन र कसरी उपभोक्ता क्वेरीहरू र व्यवहार परिवर्तनमा आधारित अवस्थित अभियानहरू समायोजन गर्नु पर्छ।
प्रत्येक मेट्रिकका लागि तपाईले देख्नुहुने नम्बरहरू जुन तपाईको कुञ्जी शव्दहरूको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा खोजशब्दहरूको सेटको आधारमा तपाईले आफ्नो विज्ञापनमा के खर्च गर्नुभयो। यदि तपाइँको बजेट परिवर्तन भयो भने, यी संख्याहरू पनि परिवर्तन हुनेछन्, प्रमाणित गर्दछ कि समग्र गूगलको दृष्टिकोण कस्तो छ। यद्यपि गुगलले यो बताउन सक्दो प्रयास गर्दछ कि अधिक खर्च गर्नु राम्रो रूपान्तरणको बराबर हुँदैन।
जब तपाईं आफ्नो विश्लेषण पूरा गर्नुहुन्छ, यी वा सबै चरणहरू लिनुहोस्:
तपाईंको पूर्वानुमान डाउनलोड गर्नुहोस्।
टीम साथीसँग कुञ्जी शब्द योजना साझा गर्नुहोस्।
यो डेटा तपाईंको भुक्तान मिडिया, SEO, र सामग्री मार्केटिंग रोडम्यापमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ विचार गर्नुहोस्।
गुगल विज्ञापनमा पूर्वानुमान हेर्नका लागि केहि तरिकाहरू छन्?
यस उत्तरका दुई प्रकारहरू छन्।
पहिलो हो, होईन।
दोस्रो हो त्यहाँ यो विश्लेषण प्राप्त गर्न को लागी अर्को तरीका छ, र तपाई यसलाई खोज्नुहोस् नयाँ खोजशब्दहरु लाई क्लिक गरेर खोज भोल्युम र पूर्वानुमान प्राप्त गर्नुको सट्टा तपाईले सुरु गरेकोमा क्लिक गरेर फेला पार्न सक्नुहुनेछ। "डिस्कभर नयाँ" विकल्पको साथ, तपाईं सक्नुहुन्छ:
तपाइँको कुञ्जी शव्दहरूको रूपमा प्रयोग गर्न नयाँ विचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईको अवस्थित कुञ्जी शव्दहरू सम्पादन गर्नुहोस् डेटामा प्रदान विश्लेषणको आधारमा।
तपाईका कुञ्जी शव्दहरूको प्रदर्शन पूर्वानुमान पनि देख्न सक्नुहुन्छ एक पटक तपाइँको योजनामा ​​छन्
एक वैकल्पिक उपायको रूपमा, तपाईं नयाँ मार्केटिंग अभियानहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ यो उपकरणले प्रदान गर्ने सकारात्मक पूर्वानुमानको आधारमा। त्यसोभए तपाईले सकारात्मक प्रतिक्रियाको आधारमा नयाँ अभियान सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ वा यस जानकारीलाई तपाईले पहिल्यै चलाइरहनुभएको अभियानलाई सुदृढ पार्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईको योजनाको लागि खोजशब्दहरु जोड्न चाहानुहुन्छ खोजको नयाँ खोजशब्द विधि प्रयोग गरी उनीहरूको प्रदर्शनको पूर्वानुमान गर्नका लागि, निम्न चरणहरू निम्नानुसार छन्:
तपाईले खोज्न चाहानु हुने प्रत्येक कुञ्जी शब्दको छेउमा बक्सहरू चयन गर्नुहोस्। त्यसो भए, तपाईं ड्रपडाउन विकल्प क्लिक गर्नुहोस् जुन भन्छ, "योजनामा ​​थप्नुहोस्।"
तपाईं या त योजनामा ​​थप्न वा अवस्थित अभियानमा थप्न रोज्न सक्नुहुन्छ।
ड्रपडाउन विकल्प क्लिक गर्नुहोस्। ड्रपडाउन विकल्प बोर्ड म्याच प्रयोग गरी एउटा मिलान प्रकार चयन गर्नुहोस्।
किवर्डहरू थप्नुहोस् चयन गर्नुहोस्, र तपाईंले सक्नुभयो।
गुगल विज्ञापनमा कसरी कुञ्जी शब्द प्रवृत्तिहरू हेर्नुहोस्
माथिका केही अनुच्छेदहरू, हामी तीन ट्याबहरू उल्लेख गर्‍यौं, र हामी पूर्वानुमान गर्न प्रयोग गर्थ्यौं। यद्यपि गुगल विज्ञापनमा कुञ्जी शब्द प्रवृत्ति हेर्ने उत्तम तरिका तेस्रो ट्याब मार्फत हो जुन ऐतिहासिक मेट्रिक्स हो।
जब तपाईं ऐतिहासिक मेट्रिक्स ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ:
औसत मासिक खोजहरू
कम मध्यम वा उच्च प्रतिस्पर्धा
विज्ञापन छाप साझा
पृष्ठ बिडको कम र उच्च शीर्ष
जब तपाईं यो ऐतिहासिक डाटा तपाईंको गुगल विज्ञापन खाताबाट पूर्वानुमान प्रोजेक्सनको साथ मिलाउनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो उद्योगमा कुञ्जी शव्दहरूको विस्तृत तस्वीरको साथ छोड्नुहुनेछ।
नोट: गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरण बिडहरू, बजेट, र ऐतिहासिक alityतु डेटाको लागि खाताहरू; अर्कोतर्फ, यसले यी सबै तत्वहरूलाई विचारमा राख्दैन। तुलना गर्दा दिमागमा राख्नुहोस्।
कसरी गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरण समग्र सशुल्क मीडिया मिक्सको साथ फिट हुन्छ
सशुल्क मिडियाका यसका फाइदाहरू छन्। जबकि Google विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरण तपाइँको मार्केटि rep भण्डारमा एक राम्रो प्रयोग भएको कम्पोनेन्ट हुनुपर्दछ, यो केवल तपाईमाथि निर्भर उपकरण हुनसक्दैन। यो माध्यमिक भोजन सेवा गर्दछ जब तपाईं यसलाई अन्य उपकरणहरू जस्तै फ्यूज गर्नुहुन्छ:
यस उपकरणले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि शब्द वा कम्पनी द्वारा ट्राफिक खोजी गर्न अनुमति दिन्छ। गुगल प्रचलनहरूको साथ, तपाईं सर्त र निकायहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र डाटा द्वारा दृश्य, स्थान, सम्बन्धित शीर्षक, र सर्तहरू तोक्न सक्नुहुन्छ। यसले ल्याण्डस्केपमा भर्खरका परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तपाइँका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिन्छ।
गुगल बेंचमार्क रिपोर्ट
यो अर्को उपकरण हो जुन अतुलनीय मूल्यको साबित भएको छ। यो रिपोर्ट गुगल एनालाइटिक्स भित्र छ। बेन्चमार्क रिपोर्टले तपाईंको ट्राफिक अवलोकन गर्दछ र यसलाई तपाईंको उद्योगमा अवस्थित बेन्चमार्कसँग तुलना गर्दछ। यो बेन्चमार्क समग्र उद्योगबाट आएको हो र कुनै विशिष्ट कोठा होइन, तपाईं कति राम्रो प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेबारे तपाईंको स्पष्ट विचार छ। यसले तपाइँको उद्योगमा एक अर्का खेलाडीहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको कुरा देखाउँछ। यस रिपोर्टको एक अंश हामीले सबैभन्दा उपयोगी फेला पार्छौं त्यो अंश त्यो तपाईंको आफ्नै ऐतिहासिक र हालको डाटा तुलना गर्दछ। यसले तपाइँलाई कसरी सुरु गर्नुभयो र कत्तिको टाढा आईपुग्नुभयो भन्नेको ज्वलन्त तस्वीर प्रदान गर्दछ।
गुगल विज्ञापन स्वचालित अंतर्दृष्टि
यो गुगलबाट भर्खरको विकास हो। यसले गुगल ट्रेंडहरूको शक्तिलाई हार्नेस गर्दछ र त्यसपछि तपाईंको गुगल खातामा प्रासंगिक डाटा आयात गर्दछ। यस डाटाको साथ, तपाईं ब्रेकआउट सर्तहरू साथै तिनीहरूको वृद्धि भविष्यवाणीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणको साथ एक सुपर-शक्तिशाली थप हो जुन तपाईंको व्यवसाय र मार्केटिंग योजनालाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्दछ। साधारण शब्दहरूमा, यसले तपाइँलाई नयाँ श्रेणीमा स्लाइड गर्न अनुमति दिन्छ तपाइँको प्रतिस्पर्धाले के हुँदैछ भनेर बताउँदछ।
गुगल विज्ञापन कुञ्जी शब्द पूर्वानुमान उपकरण तपाईंको व्यवसायलाई अगाडि देख्न मद्दत गर्दछ। यसले तब ती व्यवसायहरुलाई तिनीहरूको उद्योगको धारमा रहन मद्दत गर्दछ। भुक्तान मिडिया रणनीति निर्धारण गर्न ऐतिहासिक र वर्तमान डाटा प्रयोग गरेर, भविष्य देख्न सकिन्छ।
हाम्रो मद्दतको साथ, तपाईं मेट्रिक्सको हातमा काम गर्न आफ्नो व्यापार लाइन समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, र Semalt पेशेवरहरु तपाइँको प्रतिस्पर्धा को लागी एक बार सेट गर्नेछ। यहाँ, त्यहाँ कुनै आईएफएस छैन, र, वा यसको बारेमा बुट्स।